HDToday.TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu+Series] - Luso Gamer
Kana iwe uchitsvaga online yakanakisa android varaidzo. Zvekuona mabhaisikopo asingaperi, Series uye TV Shows mahara. Zvadaro tinokurudzira avo vashandisi veAndroid kudhawunirodha uye kuisa yazvino vhezheni yeHDToday.TV Apk.
Iyo application inoonekwa seyakakura online papuratifomu. Iko vashandisi veAndroid vanogona kufambisa zviri nyore varaidzo isina muganho mahara pasina kunyorera kunyoreswa kana kunyoreswa. Zvese zvavanoda kuita kurodha yazvino vhezheni yeApk.
Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Rangarira maitiro ekuona mhenyu Mamuvhi uye Series ari nyore. Asi pano tichakurukura matanho akakosha anosanganisira maitiro ekubatsira vanotanga kufambisa mavhidhiyo kuburikidza neHDToday TV App.
Chii chinonzi HDToday.TV Apk
HDToday.TV Apk ichitoro chakakwana chevaraidzo yepamhepo. Iko vashandisi veAndroid vanogona kuona uye kurodha unlimited mavhidhiyo anosanganisira mafirimu emahara. Kunze kwekuona mafirimu epamoyo, chishandiso zvakare chinotsigira yakananga kurodha sarudzo.
Kunyangwe isu takawana yakanyanya kushomeka nhamba yemapuratifomu epamhepo anogona kupa iyi sarudzo. Vazhinji vevashandisi veandroid vanotsvaga online emahara mapuratifomu. Nekuti mazhinji epamhepo anosvikika mapuratifomu ane mukurumbira ndeye premium.
Zvinoreva kuti kunze kwekunge vaoni vachida kutenga rezinesi. Ivo havakwanise kunakidzwa nekuwana main dashboard yekuona mavhidhiyo. Mutengo wekunyorera wepremium unogona kudarika mazana anodhura uye asingagoneki kune vashandisi veandroid.
Zvisinei pano tadzoka neiyi online yakakwana Vadivelu Comedy Movie App. Iye zvino vaoni havambofa vakasungirwa kuisa mari mazana ezviuru zvekuona varaidzo. Vanoda kuita kungoisa yazvino vhezheni yeHDToday TV Dhawunirodha.
zera 19.9 MB
Developer WHD Nhasi
Package Zita com.wHDToday_14784792
Kana tapedza nekuongorora faira rekushandisa. Isu takawana akawanda akasiyana pro maficha mukati. Kunyangwe zvese zvakakosha zvinodikanwa sarudzo dzakawedzerwa. Izvo zvinosanganisira Zvikamu, Yakapfuma Kutsvaga Sefa, Tsika yekumisikidza Dashboard, Push Notification Yeuchidzo nezvimwe.
Kunze kwezvisarudzo zvekutanga, iyo application inotsigirawo mamwe ma pro maficha. Aya ndiwo maPremium Servers, Tsika Vhidhiyo Inoridza uye Yepamberi Inoteerera Dhizaini Dhiza. Chinangwa chekubatanidza aya ekutanga maseva ndechekubata data zvakachengeteka.
Pakutanga vazhinji vashandisi veandroid vakanyunyuta nezvekuba data mushure mekuisa yechitatu bato rinotsigirwa maapplication. Kunyangwe maapplication akadaro ane njodzi kushandisa uye anogona kukumbira zvibvumirano zvisina basa. Kubvumira izvo zvibvumirano zvinogona kuwedzera kusadzika kwedata.
Asi iyo yakaunzwa application pano inogona kusambokumbira mvumo yekuwedzera. Zvakare, data remuoni rinosanganisira zvitupa zvekupinda zvichachengetwa mukati mesevha yakavanzika maseva. Zvinoreva kuti kuba data kunoonekwa kunge kusingabviri.
Iwo akavanzika maseva anozowedzera iyo data mapaketi kupa. Kunyangwe maseva anopindura achapa data nekukurumidza pane inononoka internet yekubatanidza. Saka iwe uri fan hombe yekuona emahara premium Mamuvi uye Series wobva warodha HDToday TV Android.
Iyo faira rekunyorera rakasununguka kurodha pasi.
Kuisa iyo app kunopa kusingaperi varaidzo.
Zviratidziro zveTV zvinowanikwawo kuti uone.
Hapana yakananga IPTV Zviteshi zviripo kuti utarise.
Speedy maseva akabatanidzwa kune data service.
Kunyoresa sarudzo inochengetwa sarudzo.
Maitiro ekurodha HDToday.TV Apk
Panzvimbo pekuenda zvakananga kune yekumisikidza uye kushandiswa kwekushandisa. Nhanho yekutanga kurodha uye kune iyo vashandisi veandroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa mafaera echokwadi.
Usati wapa iwo echokwadi mafaera mukati mekurodha chikamu. Isu tinoisa iyo Apk pamusoro peakasiyana android smartphones. Kana tangove nechokwadi nezve kushanda zvakanaka kweApk, iyo nyowani inopa application mukati mekurodha chikamu.
Isu takatoisa Nhasi TV Apk pamusoro peakasiyana android smartphones uye hatina kuwana dambudziko. Kunyangwe vashandisi vanofara chaizvo nemasevhisi anosvikika. Saka iwe uri fan hombe yevaraidzo saka iwe unofanirwa kuyedza ichi chikuva chitsva.
Webhusaiti yedu yakapfuma mune dzakasiyana varaidzo application. Izvo zviri kufamba uye zvakakurumbira pakati pevashandisi veandroid. Kuti utarise izvo zvinosvikika zveandroid maapplication, ndapota tinya pane zvataurwa zvinongedzo. Ndivo Sratim TV Apk uye IweCine Apk.
Iwe unoda kuona ekutanga Mafirimu uye Series. Asi haugone kuwana imwe yepamhepo yemahara chikuva yekuona uye kurodha mavhidhiyo achangoburwa. Ipapo isu tinokurudzira avo vashandisi veAndroid kurodha HDToday.TV Apk. Izvo zvemahara kurodha kubva pawebhusaiti yedu nekudzvanya kumwe chete.
Categories Entertainment, Apps Tags HDToday TV Android, HDToday TV App, HDToday TV Download, HDToday.TV Apk, Vadivelu Comedy Movie App Post navigation
Nanovest Apk Dhawunirodha Ye Android [Kuwana App]